Alina Masina – Trinitera Malagasy
Ny Alakamisy Masina isika dia nankalaza ny Eokaristia, izay mampahatsiaro antsika fa ny fanompoana no mampisy heviny ny fiainantsika, ny fanompoana ny hafa fa tsy ny fanompoana ny vola aman-karena na ny laza amam-boninahitra. Ny Eokaristia no mofon’aina mamelona izay te hanara-dia an’i Jesoa amin’izany lalan’ny fitiavana izany.
Ny Zoma masina, manaraka ny lalan’ny hazofijaliana, izay lalan’ny fitiavana, lalana mitondra amin’ny fahafatesana sy ny fahafaham-baraka ho an’ireo mifikitra amin’ny fahefany sy ny tombontsoany, fa lalana anehoan’i Jesoa ny fitiavan’Andriamanitra kosa ho antsika manara-dia Azy. Eo amin’ny Γαββαθά (gabbathà), toerana avo, hitoriana ny vaovao mahafaly hoy Izaia (Iz 40, 9) no nitondran’i Pilaty Azy, ary io ilay λιθόστρωτος (lithostrotos), vato tsara rary, ilay רָצַף (ratsaf), lazain’ny Tononkira fa “amborodao, asam-pitiavana avy amin’ny tovovavin’i Jerosalema”, eo afovoan’ny toerana hampiakaran’ny Mpanjaka antsika ho vadiny (Tonk 3, 10-11).
Anio alina kosa isika mandinika ny fitiavan’ilay Andriamanitra manoro antsika ny lalana mitondra mankamin’ny fahasambarana, saingy tsy misolo antsika kosa amin’ny fizorana amin’izany lalana izany. ny Fahalalàna Azy no fahasambarana, izany no fiainana mandrakizay, hoy Md Joany, ka manampy antsika hahalala ny tena Endrik’ilay Andriamanitra tompointsika ny vakiteny Masina vakiana anio.
Alina Masina: dabar דבר & deborah דברה
Efa miteny ho azy ny Litorjia amin’ity alina ity. Mahasoa ny mamintina ireo vakiteny sitraky ny fiangonana ankalazaina ity alina ity, hamintinana ny tantaran’ny Famonjena antsika, hazavain’ny Fandresen’i Kristy amin’izao alina izao dia ilay alina masina niatrehan’Izy Tompo samirery ny fijaliana sy ny fahafatesana, fa alina masina nisitrihan’ireo mpianatra ihany koa satria any am-pasana no niheveran’izy ireo ilay Tompon’ny aina.
Ny deborah (דברה, feminin de dabar, tantely, jiro vita tamin’ny tantely savoka) apetraka eo anoloan’ny dabar (דבר teny) dia manambara amin’ny Kristianina fa i Kristy, maty namela mamy, ny hazavan’Izy nitsangan-ko velona no manome hasina sy heviny ny tantaram-pamonjena manontolo, fintinin’ireo vakiteny 7 amin’ity alina ity. Raha tsy nitsangana i Kristy, dia zava-poana ny toriteninay, ary foana ny finoantsika, hoy Md Paoly.
Vakiteny I. : Jenezy 1, 1 – 2, 2 (na fohy : 1, 1.26-31a)
Sal : 103 (104), 1-2a, 5-6, 10.12, 13-14ab, 24.35d na 32, 4-5, 6-7, 12-13, 20.22
Mampianatra antsika handahatra ny zavaboary sy ny fiainana araka ny naharian’Andriamanitra antsika ny Boky Jenezy. Nohariany ho mafy orina manko izany, narindrany mba hampahavokatra ny asan’ny olona ka mampisaotra ny Tompo (sal 103). Ny hazavana no noharian’Andriamanitra mba hahatonga ny fiainantsika hilamina (miala amin’ny toetrany תֹּהוּ tohù, mikorontana sy tsisy endrika tsy azo honenana) sy ho azo honenana (hahasarika ny olona fa tsy ho בֹּהוּ bohù, babangoana sy foana tsisy mponina). Ny Hazavana no hahafahantsika manavaka ny lanitra sy ny tany, manavaka izay maharitra sy mandalo ihany, manavaka ny tany sy ny ranomasina, ny tsara sy mahavokatra sy ny ratsy mampatahotra sy mamongotra ny aina, ka hiandrasana ilay masoandro miposaka ka tsy hilentika intsony fa manazava ny maraina vaovao mandimby ny alina. Avy amin’ny fihainoana ity vakiteny ity isika no hianatra hankafy ny zavaboary ka hahita fa “tsara indrindra izany”. Na dia ao anatin’izay mety ho zavatra mafy sedraina amin’ny fiainana aza, dia hahay hibanjina ny hatsaran’ny asan’Andriamanitra.
Vakiteny II. : Jenezy 22, 1-18 (na fohy : 22, 1-2.9a.10-13.15-18)
Salamo : 15, 5.8, 9-10, 11
Rehefa noharian’Andriamanitra isika dia nofidiany mba hanasoavany ny firenena satria nihaino ny feony. Ny Finoan’i Abrahama no ivondronantsika mankalaza ilay Zanak’ondry nisolo an’Isaaka atao sorona ho famonjena antsika. Io ilay Andriamanitra “eo aloha”, “eo an-kavanana” sy eo an-kavia, ka “hafinaretan-dava eo an-kavanany” satria manoro antsika ny lalana mankamin’ny fahasambarana Izy (Sal 15).
Vakiteny III : Eksaody 14, 15 – 15, 1a
Tononkira : Eksaody15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18
Ny fanafahany ny vahoakany avy amin’ny fanandevozana no lalana hitondran’YHWH azy ireo ho any amin’ny tany nampanantenainy. Navondron’Andriamanitra ho vahoakany isika. Notiaviny manokana mba hitory ny hatsarany amin’ny taranaka sy ny olona rehetra. Izay nafahan’Izy Tompo ihany no afaka mankalaza ny Pakany. Tsy azo adinoina anefa fa efa-polo taona nivenjivenjy tany an’efitra ireo vahoaka ireo, ary tsy tafiditra ny tany nampanantenaina akory, na i Moizy aza, satria tsy nihaino an’Andriamanitra.
Vakiteny IV: Izaia 54, 5-14 –
Salamo: 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6de.12, 13
Tsy vahoaka fe vahoaka anefa fa “vadin’ny Mpahary azy”, “Ikala ory” saingy vadin’ny fahatanorana, ka na manana ny ditrany aza dia tiavina sy amindrana fo mandrakariva, ary hirariany mba hiadana amin’ny fahendrena mbamin’ny fiadanan’ny taranaka. Tsy afaka ny tsy hidera ny Tompo izay nanafaka azy izay notiaviny toy izany (Sal 29).
Vakiteny V: Izaia 55, 1-11 –
Tononkira : Izaia 12, 2, 4bde, 5-6
Izy Tompo koa no mamelona maimaim-poana ny vahoakany, mampamokatra ny Tany mba hampahazo voa afafy sy hanina ho an’ny mpamafy. Ny Teniny no manan-kery hanatontosa ny sitrapony. Tsy matahotra intsony aho fa matoky, hoy ny Mpaminany ao amin’ny setriny, ka manentana ny mpihaino azy hidera sy hiantsa ny anaran’ny Tompo.
Vakiteny VI : Baroka 3, 9-15.32 – 4, 4 –
Salamo : 18B, 8, 9, 10, 11
Andriamanitra no maniraka ny fahazavana, hoy Baroka. Ny didiny no fahendrena satria manoro ny lalana mitondra amin’ny fahasambarana. Izay te ho sambatra araka izany dia tsy maintsy mitandrina ny Didy, mizotra amin’ny fahazavan’ny Tompo mamirapiratra. Izay mifikitra Aminy no ho tonga amin’ny fiainana, fa izay mandao Azy koa ho any amin’ny fahafatesana. Ny didy aman-dalan’Izy Tompo ihany no mahafaly ny fo, hoy ny Salamo 18.
Vakiteny VII : Ezekiela 36, 16-17a.18-28
Salamo : 41 (42), 3, 5 ; 42 (43), 3, 4
Tsy ambom-pon’olombelona anefa no hahafahany mifikitra amin’izany lalan’Andriamanitra izany fa ny fahasoavan’Andriamanitra ihany. Tsinjon’i Ezekiela sahady ny Ranon’ny Batemy manadio ka manavao ny fo sy ny fanahy ho feno ny Fanahy Masina ka hizotra araka ny fitsipika (izay mitondra mandrakariva any amin’ny fahasambarana), ho fanomezam-boninahitra ny Anarany lalaintsika baraka, ka hotantanan’ny hazavany sy ny fahamarinany hatrany am-bohitra masina (Sal 41). Any no hiantsantsika hoe : “Amen Aleloia” mandrakizay, hoy i Md Augustin.
Eto koa no miredona ny Voninahitr’Andriamanitra izay nandray ny Fanahiny ka mitarika vahoaka handroso ao an-tranon’Andriamanitra amim-peo fifaliana sy fiderana sy horaka aman-danonana manako (Sal 41 ihany).
Raha misy batemy :
Tononkira : Izaia 12, 2, 4bde, 5-6 na Salamo : 50, 12-13, 14-15, 18-19
Taratasy : Romana 6, 3b-11
Ny Batemy no nandraisantsika ny Fanahiny tamin’ny nisitrihantsika tao amin’ny fahafatesan’i Kristy ka hitsanganantsika ho velona amin’ny fiainam-baovao araka ny Evanjeliny, ka ho faty raha ny amin’ny fahotana. Izany no mahatonga ny Zanaky ny Fiangonana tsy afaka ny tsy handray anjara amin’ity alina ity, mba hanavao ny fiombonany aina amin’i Kristy sy ny Egliziny.
Salamo : 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23
Evanjely : Matio 28, 1-10/Lioka 24, 1-12/Marka 16, 1-8
Izay mino fa ny fanolorana ny tena ho an’ny hafa ho fitiavana no fahalavorarian’ny maha-olona dia tsy hitady any amin’ny toeran’ny maty ilay Tompon’ny aina. Ny fampianaran’i Jesoa no manampy antsika hahazo izany. Tsy ny fitondran-tena lafatra no mampiavaka ny Kristianina. Misy olona tsy kristianina sy tsy mahalala an’Andriamanitra akory manasoa sy tsara fitondran-tena lavitra noho ny kristianina. Tsy midika izany fa afaka mibolila amin’ny fitondran-tenany ny Kristianina. Ny mampiavaka antsika dia ilay fanantenana mitsiry ka mahazo laka ao am-pontsika vokatr’izay finoana an’i Jesoa tafatsangan-ko velona izany. “Aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly amin-kamoram-po sy fanajana an’izay rehetra manontany anareo ny amin’ny anton’ny fanantenana izay ao aminareo”, hoy i Md Piera (1 Pi 3, 15).
I Kristy tafatsangan-ko velona no fototry ny fanantenantsika.